Yiziphi izinhlobo zomshuwalense wemoto yenkampani okhona? | Ezezimali Zomnotho
Umshuwalense wemoto uyisihloko noma yimuphi umnikazi wemoto azi kahle. Kodwa-ke, uma unenkampani lapho izimoto noma ezinye izinhlobo zezimoto zenkampani zisetshenziswa, ziphethe umshuwalense okhethekile, obizwa umshwalense wemoto yenkampani.
Kodwa yini leyo mishwalense? Yiziphi izinhlobo ezikhona? Zingabalwa kanjani? Ingabe kukhona izinzuzo eziningi kunomshuwalense wemoto ojwayelekile? Sikuchazela ngezansi.
1 Uyini umshuwalense wemoto yenkampani
2 Izinhlobo zomshuwalense wemoto yenkampani
2.1 Umshuwalense ngemikhumbi
2.2 Umshuwalense ohlukile wemikhumbi efanayo
3 Ungawubala kanjani umshuwalense wemoto
4 Izinzuzo zomshuwalense wemoto yenkampani
Uyini umshuwalense wemoto yenkampani
Ngokuvamile, umshwalense wemoto yenkampani uyindlela yokuvikela lokho imoto esetshenziswa ngendlela efanele, okungukuthi, isetshenziselwa ukwenza umsebenzi. Akufani nomshuwalense wangasese, ngokwesibonelo lowo onawo emotweni yakho noma isithuthuthu, ngoba awusebenzeli umsebenzi, kodwa ukuhamba, ukuzijabulisa ... ngamanye amagama, ukuzisebenzisela wena.
Lolu hlobo lomshuwalense lunalo izimo ezahlukile kunalezo ezidingekayo futhi ezahlukahlukene ezidingekayo Lokho kuzoya ngohlobo olukhethiwe (ngoba kunezinketho eziningi). Kepha ngaphambi kokukhuluma ngezinhlobo zomshuwalense wemoto wezinkampani, kufanele wazi yiziphi izinhlobo zezimoto ezingavikeleka ngalokhu. Ngokuvamile, ungaqiniseka:
Okwezimoto zenkampani. Lokho wukuthi, ezimotweni ezisetshenziswa ngabasebenzi bakho noma abaphathi benkampani ukwenza lo msebenzi. Lapha ungafaka futhi amaveni noma amaloli ngoba kuyizimoto ezisetshenziselwa ukulethwa, ukuthuthwa, insizakalo yezobuchwepheshe ...
Okwemishini. Sikhuluma ngezimoto zemishini, nazo ezingaba nomshwalense.
Emalolini nasezimotweni ezisindayo. Yizimoto okuthi, ngenxa yezimo zazo, zidinge umshwalense ocacile kubo.
Kumabutho. Ekugcineni, unomshuwalense wemoto wenkampani "wezimoto", ukuqonda inani elikhulu kangaka lezimoto enkampanini. Isibonelo, enkampanini yamabhasi, bangaba baningi abangahlanganisa imizila ehlukene.
Izinhlobo zomshuwalense wemoto yenkampani
Ngaphakathi kwezindlela zomshuwalense zezimoto zenkampani, sithola izinhlobo ezimbili:
Zingezinye zezinketho ezikhethwa kakhulu yizinkampani ngoba ibonakala ngokuhlanganisa zonke izimoto zenkampani esivumelwaneni esisodwa. Ngale ndlela, kukhethwa uhlobo lomshuwalense olususelwa ekusetshenzisweni, ukwazi ukukhetha umuntu wesithathu, oweluliwe wesithathu noma umshuwalense onobungozi ngokuphelele.
Futhi ikuphi ukumbozwa okuvame kakhulu? Bangaba amawindi, ukweba, umlilo ... Iqiniso ukuthi izinkampani zinikezwa ukuguquguquka okukhulu ngoba lokho okumayelana nokwenza umshwalense ohlangabezana nezidingo zemoto ngayinye.
Njengokwehlukile, yilokho bonke abanininqubomgomo yezimoto kumele baqinisekiswe, okungukuthi, kubo bonke abangayisebenzisa ngesikhathi esithile. Ngisho nasezinkampanini zezinkampani eziqashisa izimoto kwenziwa okufanayo.
Umshuwalense ohlukile wemikhumbi efanayo
Enye indlela phakathi kwezinhlobo zomshuwalense wezinkampani ukuvikela imoto ngayinye ngokusetshenziswa kwayo. Bebezoba semikhunjini efanayo, kepha ngayinye izoba nemibandela yayo kanye nokumbozwa.
Es ifana kakhulu nomshuwalense ngamunye, kepha ngezinzuzo ezithile, ikakhulukazi uma kuyinombolo ephezulu yezimoto okufanele ziqinisekiswe. Vele, ezimweni eziningi bobabili umninipholisi kanye nomnikazi womshuwalense bangabantu "abafanayo", okungaba segameni lenkampani.
Ungawubala kanjani umshuwalense wemoto
Ngaphambili, ukubala umshwalense wemoto kumshwalense, bekufanele uye ehhovisi ukuze bazophawula ngezinketho ezahlukahlukene, izembozo futhi bazokwenzela isilinganiso sezindleko zalowo mshuwalense. Kodwa-ke, ubuchwepheshe obusha benze ukuthi kube lula ukushiya lokhu ngemuva bese uthola ukuthi uzenzele inqubo ngokwakho.
Ukuze ukwenze, kufanele faka iwebhusayithi yomshwalense oyithandayo futhi bazoba nefomu noma isigaba lapho, ngokusebenzisa izinyathelo ezimbalwa lapho unquma khona uhlobo lomshwalense owufunayo, imoto nokutholakala, bazokunikeza umphumela wokugcina (kwesinye isikhathi esibukweni, kwesinye isikhathi ku-imeyili yakho) ngenani elilinganisiwe. Isibonelo, umshwalense wemoto ungabalwa lapha.
Okwenziwa abanye ukukubiza ngocingo ukukwazisa bese ubona ukuthi uyawuthanda yini umshuwalense. Kulezo zimo, kwesinye isikhathi bangathuthukisa intengo abakunike yona ku-inthanethi, noma baguquke kalula. Kunoma ikuphi, lokhu kubalwa kungokwesikhashana, ngoba ngokuhamba kwesikhathi ungahlola ukuthi ungafaka noma cha ukumbozwa okuningi futhi, ngaleyo ndlela, ube nomshuwalense ophelele wemoto.
Izinzuzo zomshuwalense wemoto yenkampani
Uma ucabanga ukuba nomshuwalense wemoto yenkampani, noma ngabe yimikhumbi noma cha, kungaletha izinzuzo ezithile enkampanini. Futhi akufani nokuqinisekisa imoto eyodwa kunokukwenza ezimotweni ezingama-20. Abahlinzeki bomshuwalense bavame nikeza ukonga okuphawulekayo kwenani lemishwalense elizongenwa, kwesinye isikhathi kufinyelela kuma-40% noma ngaphezulu emananini futhi kuya ngokutholakala okunenkontileka.
Bangaba nezembozo eziningi njengomshuwalense ngamunye; noma unokufakwa okuningi ngoba ukusetshenziswa okunikezwa imoto yangasese akufani nemoto yenkampani.
Umshuwalense uguquguquka kalula. Umshuwalense wenkampani uguquguquka kalula ngoba uvumelana nezici zebhizinisi, inani lezimoto nezimo okufanele libe nazo (uma kunomshuwalense wabashayeli abehlukene, usizo lomgwaqo, imoto ezongena esikhundleni ...).
Izinqubo zihlanjululwa. Izinkampani ngokuvamile azenzi umshwalense owodwa nje kuphela wemoto yenkampani; yenza eziningana. Futhi abaphathi bayenziwa, ngaphandle kokumbalwa, ngenqubomgomo eyodwa.
Bangatholwa ku-inthanethi. Ukuvalelisa ekutholeni isikhathi sokuya ehhovisi; manje ungabathola online futhi uphathe konke.
Ukulungiswa okuqinisekisiwe. Benza ama-workshops womkhiqizo atholakale kubanikazi babo bomshuwalense, noma enkampanini yomshuwalense uqobo, ngendlela yokuthi, uma kunezinkinga ngemoto, baye kumasifundisane akhethekile anezingxenye zokungcebeleka zokuqala.
Awucabangi ukuthi kufanelekile ukuthola ngomshuwalense wemoto yenkampani bese uqala ukonga?
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Umshuwalense » Yiziphi izinhlobo zomshuwalense wemoto yenkampani okhona?